America Yoyambira Hurumende yaVaMnangagwa Kuti Isashungurudze Vanhu
Kukadzi 26, 2019
Muzinda weAmerica unoti Zimbabwe inofanirwa kusiyana nenyaya yekushungurudza vemasangano akazvimirira.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kwehutungamiri hwemasangano anoshanda akazvimirira, sezvo izvi zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zvehupfumi.
Mugwaro raburitswa nemuzinda uyu, America inoti iri kukurudzira hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa kuti iremekedze bumbiro remitemo yayo, yochengetedza kodzero dzevanhu, pamwe nekuita kuti pave nekugadzikana munyika kunopa mukana kumunhu wese kuti ave nechekuita mukuumbwa kwebudiriro yenyika mune ramangwana.
Mashoko ehurumende yeAmerica aya anouya munguva iyo vatungamiri vemasangano akazvimirira pamwe nemasangano anomirira vashandi vari kusungwa nekushungurudzwa zvisina tsarukano.
Ukuwo, kodzero dzevanhu dzinonzi dzichiri kuenderera mberi dzichityorwa nemauto pamwe nemapurisa.
Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu, uye vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti zvaitwa nemuzinda weAmerica zvinofanirwa kupembedzwa sezvo hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu sezvinonzi hapana bumbiro remitemo.